Imfundo Yezempilo | Eyenkanga 2021
Imidlalo Ukuphuma Uluntu, Inkampani Inkampani, Imfundo Yezempilo Imfundo Yezempilo Ekuhlaleni Uluntu, Impilo Ulwazi Lweziyobisi, Iindaba Ukuzonwabisa Iziyobisi Vs. Umhlobo Imidlalo Enzima Inkampani, Iindaba Imfundo Yezempilo, Impilo Iindaba Imfundo Yezempilo, Iindaba
Iindlela ezili-8 zokunyanga ukwaliwa komzimba lonyaka
Xa uphunga unganqumami, ufuna ukukhululeka komzimba, kwaye ukhawuleze! Hlanganisa la mayeza endalo e-aleji yamaxesha athile kunye namayeza ukuze uzive ungcono ngokukhawuleza.
Ukujonga amayeza e-ADHD? Isikhokelo sakho kunyango lwe-ADHD yabantu abadala
I-ADHD yabantu abadala inokuchaphazela impumelelo emsebenzini kunye nolonwabo ekhaya. Ingcali yengqondo icacisa iziseko zamayeza abantu abadala be-ADHD kunye nonyango.
Amayeza e-ADHD kunye nabantwana
Ulwazi ngamayeza aqhelekileyo e-ADHD, into eyenzayo, indlela esetyenziswa ngayo, indlela yokulawula iziphumo ebezingalindelekanga, kunye neengcebiso zolawulo lwamayeza e-ADHD.
Ewe unokukhulisa i-allergies njengomntu omdala
Ubume bendalo kunye nokutya kokutya kunokukhula kamva ebomini. Nantsi indlela yokunyanga ukwaliwa komzimba ngabantu abadala xa bevuna.
Iintsomi ze-ADHD kunye nemibono ephosakeleyo
I-ADHD yenye yezona meko zixhaphakileyo ze-neurodevelopmental ebantwaneni, kwaye yenye yezona zixhaphakileyo. Ziphikise ezi ntsomi ze-ADHD kunye neenyaniso ze-ADHD.
Ngaba kukhuselekile ukudibanisa utywala kunye ne-insulin?
Ukuba usebenzisa i-insulin ukulawula isifo seswekile, usenokonwabela isiselo esinxilisayo amaxesha ngamaxesha. Kodwa thetha nogqirha wakho ukuze uhlale ukhuselekile.
Ngaba kukhuselekile ukuxuba utywala kunye neyeza lesilungulela?
Utywala bunokubangela ukutsha, kodwa ngaba kukhuselekile ukuxuba ii-antacids kunye notywala? Funda ngakumbi malunga nonxibelelwano phakathi kwamayeza okutsha kwentliziyo njengePepcid kunye notywala.
Ngaba kukhuselekile ukusela utywala ngelixa uthatha izixhobo zokulala zikagqirha?
Kwenzeka ntoni xa uxuba utywala neepilisi zokulala? Ungayeka ukuphefumla. Ambien kunye notywala kunokukubulala. Funda ngakumbi malunga necocktail eyingozi apha.
Ngaba kukhuselekile ukuthatha iyeza lokuthintela uxinzelelo ngotywala?
Ukhe waleqa iXanax ngeglasi yewayini? Kuvakala kuyinto eqhelekileyo, kodwa kukho umngcipheko omkhulu xa uxuba utywala kunye ne-benzodiazepines.
Yintoni ngokwenene eyenzayo kubisi lwakho lwebele?
Kuyaxhomekeka. Kukhuselekile ukuthatha uninzi lwamayeza — kodwa hayi onke — amayeza xa uncancisa. Uphando ngotywala kunye nokuncancisa luyaphikisana.
Ngaba ungasela utywala kunye namayeza okubulala iintsholongwane?
Ngaba kuya kufuneka ulinde de i-antibiotics yakho iphelelwe sisiselo esinxilisayo? Iingcali zethu zichaza into ekufuneka uyazi malunga namayeza okubulala iintsholongwane kunye notywala.
Ukuphepha i-'Septemba Spike 'yeempawu zokungabikho komzimba kunye neempawu zesifuba
Kukho ukunyuka okubukhali kokuhlaselwa komzimba kunye nokuhlaselwa sisifuba xa abantwana bebuyela esikolweni. Kunqande ispike sikaSeptemba kwiimpawu ezinala manyathelo okhuseleko.
Iingcebiso ezi-5 zokuphatha ukutya okwaliwa ngumntwana wakho kwiHalloween
Ukuphathwa kweHalloween kunokuba yingozi kubantwana abanokutya komzimba. Sebenzisa ezi ngcebiso-ukusuka kwilekese engenahleki ukuya kumathanga weti-ngeholide ekhuselekileyo.
Isikhokelo sakho sokuthatha amayeza e-allergies ngelixa ukhulelwe
Ukukhulelwa kunokwenza iimpawu zokungabikho komzimba zibi ngakumbi, kodwa akukhuselekanga ukuthatha nawaphi na amayeza okunyanga xa ukhulelwe. Zama amayeza endalo kuqala, emva koko ukhethe ezi ndlela.
Uvavanywa nini umntwana wakho
Phantse isiqingatha sabo bonke abantwana besikolo banolwazelelelo kwizinto eziqhelekileyo ezibangelwa zizinto ezithile, kodwa abantwana abenza uvavanyo lokungafuneki emzimbeni akusoloko kuyimfuneko. Funda ukuba nini, njani, kwaye ngubani onokuvavanya.
Ngaba i-allergy shots iyasebenza? Ngaba zixabisekile?
Ukunikezelwa ngaphezulu kweminyaka emi-3-5 qho ngeveki, i-allergy shots ifuna ukuzibophelela kwexesha. Nangona kunjalo, banokufikelela kwi-85% esebenzayo. Linganisa izinto ezilungileyo nezingalunganga apha.
Anorexia vs. bulimia: Oonobangela, iimpawu, unyango
Nguwuphi umahluko phakathi kwe-Anorexia vs. bulimia? Thelekisa umahluko ekuchongeni isifo, unyango, kunye nokuthintela i-anorexia kunye ne-bulimia.
Iintsholongwane ezisibhozo ezibangela uC
Abantu banikwa isibulali-zintsholongwane esibanzi njengohlaselo lokuqala xa begula. Kodwa, banokubenza bagule ngakumbi, xa iincukuthu ezinje ngoC.
Yintoni oomama abanyisayo ekufuneka beyazi malunga noxinzelelo kunye nokuncancisa
Kubalulekile ukuba oomama abangabongikazi abafumana iimpawu zoxinzelelo bafune unyango-nantsi into ekufuneka beyazi ukuba babekwe kunyango.
Ungazithatha njani ngokukhuselekileyo ii-antibiotics ngexesha lokukhulelwa
Izibonelelo zokuthatha amayeza okubulala iintsholongwane ngexesha lokukhulelwa zingaphezulu komngcipheko wosulelo olungaphendulwanga lwebhaktiriya. Nazi ezinye i-antibiotics ezikhuselekileyo ngexesha lokukhulelwa.
leliphi ixesha elifanelekileyo lokuthatha i-zoloft
Kuthatha ixesha elingakanani emva kokuthatha i-synthroid?
Eyona ndlela yokunyanga usuleleko lokungunda kwezikhonkwane
Umahluko phakathi kwezicwangciso ze-hmo kunye ne-epo zezempilo
kwenzeka ntoni ukuba une-potassium ephantsi
lide kangakanani icebo b ipilisi